URory McIlroy Biography kunye neNkcukacha zoLuntu kwiGolfer
Iphrofayili ye-golfer eyaziwayo, kunye namaqiniso, amanani kunye neentlanzi
URory McIlroy waqala ukuguqula iintloko ebantwaneni bakhe abancinci, wajika phambi kweminyaka engama-20, waza waguquka waba ligunya elikhulu kwigumbi legalufa lehlabathi. Nangona kunjalo kusekuqaleni kwenkqubo yakhe yokugalufa, uMcIlroy sele sele ehlawula ixabiso njengexesha elihle kakhulu le-golfer e-Ireland .
UMicIlroy wazalelwa e-Holywood, e-Northern Ireland, kufuphi ne-Holywood Golf Club kwaye engekho kude neRoyel Belfast Golf Club. Usuku lwakhe lokuzalwa nguMeyi 4, 1989.
Ingaba unesidlaliso phakathi koontanga bakhe kwiiholide zeepagofu? Abaninzi bambiza ngokuthi "Rors." Ngo-Apreli 2017, uMcIlroy watshata no-Erica Stoll , owayengummeli we-PGA waseMelika.
IMicIlroy Pro Pro Tour
I-PGA Tour: 14
Uhambo lwaseYurophu: 13
(Yonke iMicIlroy yePGA Tour kunye neYurophu yokunqoba kwezoTyelelo zidweliswe ngezantsi.)
UMcIlroy wayinqobile yakhe yokuqala ngowama-2011 US Open. I-PGA Championship yowama-2012 ilandelwe, ngoko-2014 iBritish Open ne-Second PGA Championship nayo ngo-2014.
Amabhaso kunye neNhlonipho kaRory McIlroy
Umdlali wePGA Tour weNyaka, ngo-2012, 2014
Umlawuli we-PGA we-Tour, 2012, 2014
I-PGA Tour inkokheli, 2012, 2014
Uhambo lwaseYurophu Umdlali wonyaka, ngo-2012, 2014, 2015
Umyalelo woTyelelo lwaseYurophu weMerit winner, 2012, 2014, 2015
Ilungu, iqela le-European Ryder Cup, 2010, 2012, 2014, 2016
Ilungu, iBritish ne-Ireland Walker Cup iqela, ngo-2007
Biography kaRory McIlroy
Ngokutsho kwe-bio yaseburhulumenteni uRory McIlory, washaya i-40-yire drive xa wayeneminyaka emibini ubudala.
Yonke yenyuka esuka apho. Umgodi wakhe wokuqala ngowama- 9.
Njengomfana oseMntla Ireland, uMcIlroy wasebenzisa umdlalo wakhe kunye ne-Holywood Golf Club, uMichael Bannon. Kwaye kwenzeka izinto ngokukhawuleza kuMcIlroy ebusheni bakhe. Udlale iYurophu kwi-Junior Ryder Cup ka-2004. Ngo-2005, waba ngowona mncinci-owake waba ngumdlali we-West of Ireland Championship kunye ne-Irish Close Championships.
Kwaye ngo-2006 wayephindaphinda njengobungqina kwizinto zombini.
UMcIlroy wadlala kwindawo yakhe yokuqala yokuqhubisana kwi-British Masters, njengeminyaka eli-16 ubudala. Ngo-2006, wawina uMqhubi we-Amateur European. Kodwa ngo-2007 nguMcIlroy oqala ukuza kugxininiswa ngabaphulaphuli behlabathi behlabathi.
Ngaloo nyaka, wafika kwiNombolo 1 kwi-rankings ye-world amateur kwaye wadlala kwiqela le-GB & I kwi- Walker Cup . Yona yinto awayeyenza kwiintambo zetyelelo, nangona kunjalo, ezo zijika. UMcIlroy wenza okokuqala ekuncintisweni kwintsebenzo ye-2007 Dubai Desert Classic , eneminyaka eyi-17. Emva kweenyanga ezimbalwa, emva kokuguquka kwe-18, wayephakathi kweenkokheli zokuqala eBritish Open . Wenza isinqununu waza wagqitywa njengomtsalane ophantsi.
UMicylroy waphenduka umprofeti ngomhla we-Septemba 18, 2007, kwaye isiganeko sakhe sokuqala njengeprogram yayiyi-Masters yaseBrithani. Kwintlalontle yakhe yesibini, iDunhill Links Championship, uMcIlroy wagqiba okwesithathu, ukuqinisekisa ukuba uhlala kwi-European Tour kule nkathi elandelayo.
Ngo-2009, uMcIlroy, oneminyaka engama-20 ubudala, wathola umqhubi wakhe wokuqala kwiNdwendwe yaseYurophu kwi-Dubai Desert Classic. Kwaye kwi- Championship Hollow Championship ka-2010 , uMcIlroy wavala nge-62 yakhe yokuqala yokuphumelela kwe-USPGA. Wayenemihla embalwa yintloni yokuzalwa kwakhe kwe-21, kwaye wajoyina uTiger Woods , uPhil Mickelson kunye noSeve Ballesteros njengabagadi begaluli kuphela, ngelo xesha, ukususela ngo-1970 ukuba bazuze kwi-USPGA ngaphambi kokuba baphendule i-21.
UMcIlroy wabonakala endleleni yakhe eya kunqoba kwelokuqala kwiqonga kwi-Masters, ngo-2011, ethatha i-stroke ehamba phambili ekugqibeleni. Nangona kunjalo, waxhatshazwa ngokugqithiseleyo ekujikelezweni kokugqibela, ekhadisha i-80 kunye nokuwela ngaphandle kwe-Top 10.
Kwakungadingeki ukuba alinde ixesha elide ukuba athathe okokuqala ngempumelelo, nangona kunjalo. Iinyanga ezimbalwa emva koko ngo-2011 US Open, uMcIlroy waphendukela kwelinye leemidlalo eziphambili kwiimbambano zobuqhathanisi, ephazamisa i-tournament yokurekhoda irekhodi aze athole imivimbo eyisibhozo.
Ngo-Matshi 2012, uMcIlroy waqala ukufika kwiNombolo 1 kwinqanaba legalufa lehlabathi xa ephumelele iPGA Tour Honda Classic . Kwiinyanga ezimbalwa kamva, uMcIlroy waqokelela isihloko esikhulu esinguNombolo 2, ekuphumeleleni i-PGA Championship ka-2012. Kwi-PGA, uMcIlroy wabeka irekhodi entsha yokutyelela kwi-margin of victory, ephumelele ngemivimbo eyisibhozo.
UMcIlroy wavala ixesha lohambo lwe-2012 ngokuwina i-European Tour's season-ender, i-DP World Tour Championship e-Dubai. WayenguNombolo 1 kwizikhundla zehlabathi, kwaye wabakhokelela kokubili i-PGA Tour kunye ne-European Tour kwimbuyekezo.
UMcIlroy wanyamezela imingeni ethile ngo-2013, nangona kunjalo, ehluleka ukuphumelela naphi na ukubiza i-Open Australian ngasekupheleni konyaka. Ngomnyaka we-2014, wathi i-BMW PGA Championship ye-Championship yokuqala ye-European Tour yokuqala ukususela ngo-2012. Kamva ngo-2014, uMcIlroy wayinqoba i-third-party yakhe kwi-Open Championship. Walandela loo nto ngokuphumelela kwe-WGC elandelayo, kwaye emva kwesiqalo esilandelayo emva koko, i-PGA Championship, ngokulandelwa kathathu okulandelelana ekupheleni konyaka we-2014.
UMicroro uzuze ubambiswano lwakhe lokuqala lwe-FedEx Cup ngo-2016. Emva kokuhamba ngokungenasiphelo kulo lonke ixesha "lwexesha eliqhelekileyo lePGA," wawuthatha iindiza ezimbini ezihamba phambili, kubandakanywa neCape-final final Tour Championship.
Rory McIlroy weTownament Wins
Nalu uluhlu lweentambo zegalufa eziphumelele nguMcIlroy kwi-PGA Tour kunye ne-European Tour.
Ngamaqhosha angama-Hollow ye-2010
2014 iBritish Open
I-WGC yoMdlalo weMidlalo yeMidlalo ka-2015
2015 I-Wellgo Championship
Ngonyaka we-2016 i-Deutsche Bank Championship
2018 Arnold Palmer Ukumema
(Qaphela ukuba uMcllroy uyaphumelela kwii-majors kunye nakwii-WGC tournaments zibalwa njengezonqoba kwii-USPGA nakwiiYurophu. Ezi zihlandlo zilandelayo zibala kuphela kwiNdwendwe yaseYurophu.)
2011 Hong Kong Ivulekileyo
2015 iDaza Desert Classic
2016 I-Dubai Duty Simahla ye-Irish Open
Ithini i-Bordel inesiNgesi?
Ukuqonda nokuCwangcisa iMicimbi yeeKhobho kwi-Delphi
2006 IBritish Ivulekile: Izinkuni Zenza Izinkuni Kwi-Bag
Ukuhlawulwa kukaMongameli kunye neNkxaso-mali
Imfazwe YaseMerika: iMandla Jikelele uAbner Doubleday
Ubhekiselele: ii-Epistles zeTestamente eNtsha
I-Feudalism - Inkqubo Yezopolitiko YaseYurophu ephakathi nakwezinye iindawo
Intaba yaseWashington: Intaba ephakamileyo kunazo zonke eNew England